Xildh. Jawhar oo sheegay in ay fursaddi ku jirto qorshaha Kenya ay ciidamada ku geynayso xadka Badda ee khilaafku ka jiro – Kalfadhi
Xildhibaan Cali Jowhar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay qorshaha dowladda Kenya ay ku doonayso in ay ciidamo ku geysto halka uu ka jiro khilaafka Badda ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in xilligan aan loo baahnayn in xiriir lala lahaado dalka Kenya.
“Mar hadiiba awood meleteri ay ku dhawaaqday Kenya, wax xiriir ah ma jiri doonaba, xiriirna ka dooni mayno nin wadankayaga ku soo duulaya” ayuu yiri.
Cali Jowhar wuxuu qabaa in Soomaaliya aan loo isticmaali karin awood meleteri, halkaasna ayba ku jirto fursad weyn oo Soomaalida guduhu ay meel ka soo wada-jeensan, iyagoo dhinac iska dhigaya khilaafka u dhexeeya “Hadii ay dagaal u soo diyaar-garoobeen annaguna dagaal baan u diyaar-garoobaynaa meel kastana waan ka gelaynaa, cidday u darnaatana waa la arki doonaa” ayuu yiri.
Mudane Jowhar waxay la tahay in Kenya ay dareemayso in looga guulaystay maxkamadda, ciidamada ay sheegtay in ay geynayso xadka Badda ee lagu muransan yahayna ay ku doonayso fursad lagaga wada-hadlo xadkaas “Marnaba annagu wada-hadal ka geli mayno arrintaas” ayuu yiri Xildhibaan Jawhar.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale, hoggaamiyaha aqlabiyadda Baarlamanka Kenya oo ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Kenya ayaa toddobaadkan wuxuu saxaafadda u sheegay in dalkiisu uu difaacan doono xuduudaha sida uu Dastuurka uu qabo.
“Aadan wuxuu ku raadinayaa siyaasad khaas ah oo isaga dantiisa ah. Danta Kenya waxay ku jirtaa in ay nabadgelyo kula noolaato wadamada deriskeeda ah; siiba Soomaaliya” ayuu yiri Xildhibaan Cali Jowhar.
Xildhibaan Ducaale ayaa si weyn ugu ololaynaya in ciidamo Kenya ay dowladiisu geysto xadka Badda